रोचक – NepalajaMedia
एजेन्सी । मण्डपमा बेहुला बेहुली बसिरहेका थिए । विवाहको कर्म भइरहेको थियो । त्यसैमा वेहुलीले चुनाव जितेको समाचार मण्डपमा आइपुग्यो । उनले (बीडीसी) गाउँ विकास समिति सदस्यको रूपमा पञ्चायत चुनाव जितेको खबर पाइन् उनले त्यो खुसी सम्हाल्न सकिनन् । उनले विवाह छोडेर हिडिन् । दुलहीले बिहेको समारोह बीचमा रोकेर सिधै मतगणना स्थल पुगीन् । यो घटना रामपुरको मिलाक तहसीलको मोहम्मदपुर जाडिद गाउँको छ। जहाँ यूपीको बरेलीबाट जन्ती आएको थियो। विवाह मंडप सज्जित थियो र दुलही पूनम उनको विवाह समारोहमा सरिक भएकी थिइन् । उनलाई त्यती नै बेला थाहा भयो उनले पञ्चायत चुनाव जितेकी छन् । त्यसैले उनको खुशीको सिमाना नै रहेन उनी विवाह समारोह रोकेर सीधै मतगणना स्थलमा पुगीन् । उनी मतगणनास्थलमा रातो बेहुलीको लुगा र गहनाले झकिझकाउ भएर पुगेकी थिइन् । उनलाई यस्तो रुपमा देखेर सबै छक्क परे । तर जब मानिसहरूले थाहा पाए कि दुलही बीडीस
काठमाडौँ : वि.सं. २०७८ को पहिलो चन्द्रग्रहण(Lunar eclipse) जेठ १२ गते वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमाको दिन लाग्दैछ। जेठ १२ गते बुधबार राति दिउँसो २ बजेर ३० मिनेटमा सुरु हुनेछ र बेलुका ७ बजेर ३५ मिनेटमा समाप्त हुनेछ। यो ग्रहणको प्रभाव वृश्चिक राशि र अनुराधा नक्षत्रमा सबैभन्दा बढी पर्नेछ। यो वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण उपछाया ग्रहण हुनेछ। उपछाया भएको कारण यो ग्रहणको धार्मिक प्रभाव खासै मानिदैन। चन्द्रग्रहणले स्पर्श हुनुभन्दा अघि देखि बाल, वृद्ध र रोगी बाहेकलाई शास्त्रीय रुपमा भोजन निषेध गरिएको छ । ग्रहण लागेका बेला हवन, मन्त्र जप, मन्त्र लिने, मन्त्र सिद्धि गर्ने, दान गर्नेलगायत धार्मिक काम गर्न शुभ मानिन्छ । ग्रहण लागेका बेला सुत्न, दिसा, पिसाब, मैथुन गर्न नहुने धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धुलगायत शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, तेल लगाउन, खानपिन गर्न, कसैलाई बन्धनमा राख्न र मार्न पनि
काठमाडौं। कुनै पनि देशको लागि त्यो देशको कार्यकारी प्रमुखको निवास अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने गर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने देशमा राष्ट्रपति निवास र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने देशमा प्रधानमन्त्री निवासलाई अत्यन्तै महत्वको स्थानको रुपमा लिने गरिन्छ ।तर, से’रेमोनियल राजतन्त्र र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको देश जापानमा भने प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारी निवासमा बस्दैनन् । जापानको सरकारी प्रधानमन्त्री निवासमा विगत ९ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री बसेका छैनन् ।गएको मार्च महिनाको मध्यतिर जापानका विपक्षी नेता यो’शिहिडो नोडाले प्रधानमन्त्री निवास झण्डै १ दशकदेखि खाली रहेको तर त्यो भवनको व्यवस्थापनको लागि वार्षिक १६० मिलियन येन (१७ करोड रुपैयाँ) खर्च भइरहेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री यो’शिहिडे सुगालाई सरकारी आवासमा सर्न के समस्या छ ? भनेर सोधेका थिए ।रोचक कुरा
काठमाडौँ – ३२ वर्षकै उमेरमा ब्रुस लीको निधन भएको थियो । तर, छोटो समयमै उनले धेरैको मन जिते । हलिउडमा चिनियाँ मार्सल आर्टस् ‘कुङ फू’ भित्र्याउने श्रेय ब्रुस लीलाई जान्छ । उनी संसारकै उत्कृष्ट मार्सल आर्टिस्टमध्ये एक हुन् । हलिउड फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाउने पहिलो एसियन–अमेरिकनका रूपमा पनि उनी चर्चित छन् । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को, चाइनाटाउनस्थित अस्पतालमा १९४० नोभेम्बर २७ मा जन्मिएका ब्रुस लीको स्थायी घर हङकङ हो । उनका बाबु पनि हङकङका चर्चित कलाकार थिए । ब्रुस लीको खास नाम ली जुन फ्यान हो । उनी ‘लिटिल ड्र्यागन’ भनेर पनि चिनिन्छन् । यसको कारण, उनी चीनको ड्र्यागन वर्ष, ड्र्यागन दिन र ड्र्यागन घन्टामै जन्मिएका थिए । यस्तो समयमा जन्मिनेहरू सफल हुने विश्वास चिनियाँ समाजमा छ । ब्रुस लीको ख्याती जति चमत्कारिक छ, उत्तिनै रहस्यमयी छ उनको मृत्यु । मार्सल आर्ट कलाकार एवं हलिउड अभिनेता ब्रुस
हालसालै बिग बॉस १४ मा देखा परेकि काश्मिरा शाह निश्चित रूपमा केही समयको लागि शोमा आए पनि चर्चा भने धेरै नै कमाईन । कश्मिरा यी दिनहरुमा आफ्नो बोल्ड फोटोशूटको कारण चर्चित छिन्, जसका तस्वीरहरु उनका पति कृष्ण अभिषेकले सोशल मिडियामा सेयर गरेका थिए । ज होस, काश्मिरा उद्योग को एक प्रसिद्ध नाम हो । उनी प्राय फिल्ममा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कारण चर्चामा रहन्छिन । काश्मिराले कृष्णासँग दोस्रो विवाह गरेकि हुन् । दुबैले २०१५ बाट डेटिङ्ग सुरु गरेका थिए। उनिहरुको प्रेम कहानी पप्पू पास हो गया फिल्मको सेटबाट शुरू भएको थियो । शूटिंग पछि ती दुबै समय सँगै बिताउन थाले र त्यसपछि धेरै नजिक आए । २००७ मा, कश्मिराले आफ्नो पहिलो पति ब्रैड लिस्टरम्यानसँग सम्बन्ध वि,च्छेद गरे र धेरै वर्षसम्म कृष्णसँग लिभ इनमा बिताए । अन्ततः उनीहरू दुवैले २०१३ मा विवाहको नाम दिएर सम्बन्ध स्थापित गरे । विवाह पछि, कश्मीराको स
४७ बर्षको उमेरमा पनि मलाइका अरोड़ा आफ्नो सुन्दरतले सबैलाई मोहित पार्ने गर्छिन । उनको आफ्नो फिट शरीर र प्रेम जीवन को बारे मा छलफल मा रहन। मलाइकाको पुरानो अन्तर्वार्ता एकदमै भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी खुल्लम खुल्ला उनको सुत्ने कोठाको रहस्यमा चर्चा गर्दैछिन्। उनी खुलेरै मानिसहरूलाई आफ्नो मन पर्ने र मन नपर्ने कुरा पनि भनिरहेछिन्। मलाइकाले उक्त कुरकानीमा के भनिन, हामी तपाईंलाई बताउँछौं। मलाइका अरोड़ाले नेहा धूपिया च्याट शो मा धेरै शरारती प्रश्नहरूको जवाफ दिईन । मलाइकाले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि बोलेकी थिइन। उनले बताईन कि उनी कसरी स,म्बन्ध वि;च्छेद पछि अगाडि बढिन् । नेहाले मलाइकालाई उक्त समयमा कस्तो प्रकारको पुरुष मन पर्छ? भनेर सोधिन् । मलाइकाले भनिन् कि उनलाई दाह्री पालेको र हसिलो पुरुष मन पर्छ भनेकी थिइन । यसका साथ मलाइका अरोड़ाले बेडरूमको रहस्यमा कुरा गर्दा यस्ता धेरै कुरा बताई जुन
हलिउड स्टार काइली जेनरले हालै आफ्नो २३ औं जन्मदिन मनाएकी छन् । यो जन्मदिन उनका लागि निकै खास समेत रह्यो । जन्मदिनको अवसरमा उनले प्रेमीबाट निकै राम्रो ड्रेस उपहारका रुपमा पाएकी छन्।जुन ड्रेसमा खिचिएको बोल्ट अन्दाजका तस्बिर अहिले उनले इन्टरनेटमा शेयर गरेकी छन् । जसलाई फ्यानले निकै मन पराएका छन्।काइलीले तस्बिर इस्टाग्राममार्फत शेयर गरेकी हुन् । तस्बिरका साथ उनले ड्रेस गिफ्ट दिनेलाई प्यारा भन्दै धन्यवाद दिएकी छन् । ड्रेस मल्टीकलरको मिनी शार्ट रहेको छ । जसले काइलीलाई ह ट एण्ड से क्सी समेत देखाएको छ । ड्रेसका साथ न्युड मेकअप र ओपन हेयर्समा काइली निकै आकर्षक देखिएकी छन्। यस लुकमा उनका केही तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । जसलाई फ्यानले कमेन्ट र तारिफका बर्षा गरेका छन् । काइली शोसल मिडियामा पनि निकै सक्रिय रहने अभिनेत्री हुन् । उनी हरहमेसा आफ्नो सुन्दर तस्बिर शेयर गर्ने गर्दछिन् । जसलाई छिट्टै धेरै
काठमाडौं। के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सु’निने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वीर्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलार्इ पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो । उनले भने, ‘प्रोष्टेट पनि भनिने पुरुषमा प्रजनन ग्रन्थीमा समस्या आयो भने माथि भनिएजस्तो लक्षण देखिन्छ । रोग लाग्न यी सबै लक्षण देखिनै पर्छ भन्ने होइन । तीमध्ये एकभन्दा बढी लक्षण देखिए पनि प्रोस्टेटको स’मस्या हो कि भनेर सतर्क हुनुपर्छ । जसले दैनिक क्
शुक्र ग्रह सौर्य मण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो। यस ग्रहको सतह चट्टानले बनेको छ र यसको वायुमण्डल कार्बन्डाईअक्साइड् र बिषालू सल्फ्युरिक् एसिडले बनेको हुन्छ। पृथ्वीको सामान्य तापक्रममा सल्फ्युरिक् एसिड तरल अवस्थामा हुन्छ तर शुक्र ग्रह यती तातो छ की शुक्र ग्रहमा भएको सल्फ्युरिक एसिड वाष्पीकरण भएर ग्यासको रूपमा पाइन्छ। हरित गृह प्रभावका कारण यो ग्रह सौर्य परिवारको सबै भन्दा तातो ग्रह बनेको छ जसका कारण पृथ्वीमा बस्ने कुनै पनि सजीव वस्तु त्यहाँ जीवित रहने कल्पना समेत गर्न सकिँदैनयस ग्रहलाई अङ्ग्रेजीमा वेनस (Venus) भनिन्छ जुन रोमन माया र सुन्दरताकीदेवी वेनसकाे नामबाट राखिएको हो।। यसको वायुमण्डलमा रहेको बाक्लो बादलका कारण यस ग्रहको सतह राडारको सहायताले मात्र पहिल्याउन सकिन्छ। शुक्र ग्रह आकारमा पृथ्वीभन्दा अलिकति मात्र सानो छ । पृथ्वीको व्यास १२ हजार आठ सय किलोमिटर छ भने शुक्रको व्यास १२ हज